FICUS "MIKROKARPA": DARYEELKA GURIGA IYO SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Ugu Weyn Ee Soosaarka dalagga
Guriga xayeysiinta - ficus "Microcarp"
Ficus Microcarp waa warshad aad u qurxoon, wuxuu u adeegaa sida quruxda gudaha ee fiican.
Markaad sii kordheyso guriga, waa inaad raacdaa xeerar.
Waddanku waa Koonfur Asiya. Kobcitaanka warshadani dabiiciga ah 20-25 mitir. Muuqaalkiisu waa dhuuban, duudduuban iyo jilicsan, taajka cagaaran ee madow. Magaca sayniska waa Ficus mikrocarpa.
Waxay magaceeda u keentay miro yar oo u muuqda duurka. Marka guriga la joogo, ubax iyo midho midkoodna ma guulaysan doono, maadaama aysan jirin wax shuruud u ah pollination-ka.
In floriculture indoor waxaa inta badan koray ee style of Bonsai. Geedkan geedi socodka ahi, dhab ahaantii, nuqul ka mid ah ehelka Aasiya.
Geedku wuxuu leeyahay caleemo, caleemo ballaaran, oo ku siman oo ku habboon, on petioles gaaban. Dusha sare ee caleemaha sida hadhaaga.
Marka ubax, sida dhammaan xubnaha qoysku, waxay sameeyaan baraf, buluug, casaanyo yar yar (syconia). Waxay u eg yihiin berry.
Muddo dheer ayaa la rumeeysan yahay in ficusku uu ka caawiyo inuu ku raaxaysto guriga iyo xasiloonida nolosha qoyska.
Caleemaheeda waxay nadiifisaa hawada, iyagoo ku cabaya walxaha waxyeelada leh.
Isla mar ahaantaana, wuxuu leeyahay hanti waxyeelo leh.
Casiirka la sii daayo marka la gooyo caleemaha waxay sababi kartaa xasaasiyad iyo cuncun maqaarka. Sidaa darteed, dhammaan manfacyada waxaa lagula talinayaa inay qaadaan gacmo gashi.
Horumarka noocan ah ee qaabka Bonsai, waxaa la siiyaa qaab gaar ah, oo ka kooban hufnaan isweydaarsiyo xididada. Waxay ku yaalliin dheriga sare waxayna u eg yihiin mashiinka sculptural, oo lagu qurxiyo taaj culus.
Laakiin si ay u koraan quruxda sida, ubaxu waa inuu raaco xeerarka qaar.
Isla markiiba siiso meel uu si joogto ah u ilaalin doono. Waa inay ahaato iftiin, laakiin aan lahayn qorraxda tooska ah, laga ilaaliyo qoraalada.
Labada usbuuc ee ugu horreeya ee guriga - muddada la qabsiga xaaladaha cusub. Ficus way iska tuuri kartaa caleemaha, laakiin maaha cabsi. Laga soo bilaabo weelka maraakiibta waxaa loo baahan yahay in la beddelo, laakiin kaliya 3 asbuuc kadib.
Moobeyaal bilawga ah ka dib iibsashada, dibna dib loogu dhigo biyo laba maalmood.
Fikradda sawirka "Microcarp":
Qalitaan joogto ah ayuu u baahan yahay. Samee hal mar, saddexdii sanoba mar.
Bedelka sanad walba ma jirto baahi, laakiin waxay ku talineysaa badalida qaybta ciidda. U soo wareejinta weel cusub ayaa la wadaagaa substrate hore.
Ka reeban waa bedelka beerka kadib. Substrate taas oo dhirta lagu iibiyo ma aha mid ku habboon beerashada muddada-dheer iyo gabi ahaanba bedelay.
Ka hor inta nidaamka, dhirta aan la waraabin si ay xididada si fudud u nadiifin. Lakabka lakabka ah waxaa lagu shubaa weel cusub, ka dibna ciidda ficus. Isku darka waa la iibsan karaa diyaar u ah, gaar ah.
Haddii tani aysan suurtagal ahayn, ka samee siga, cuf iyo peat.
Si loo ilaaliyo aaladaha hooseeya, dhuxusha waxaa lagu daraa halbeegga.
Dhexdhexaadka dheriga ama xoogaa ka baxsan, geli geedka oo daboolo meel bannaan oo carrada leh. Iska xakee adigoo si fudud ugu riixaya weelka.
Cabbirka dheriga waa in uu ahaado 3-4 sentimitir oo ka weyn kii hore. Haddii aadan rabin ficus in uu koro size, ma bedeli kartaa suxuunta, laakiin kaliya bedelka ciidda.
Qaababka ka kooban ciidda
Halabuurka waxaa lagu doortaa iyadoo ku xiran da'da.
Wixii carruriga yar yar waa inuu noqdaa mid dabacsan sida ugu macquulsan:
Xaashida soodhada - 1 saac.
Peat - 1h.
Ash geedeed - 0.5 h.
Dadka qaangaarka ah waxay ubaahan yahiin wax ka kooban:
Dhulka Leafy - 2 saacadood
Sod - 2 h.
Sand - 1 saac
Humus - 1 saac
Ka dib marka biyaha intarnetka ah "Microcarp"?
Qalabaynta ciidda looma oggolaan karo, si joogta ah u waraabi ficus. Biyaha la isticmaalay waa jilicsan, heerkulka qolka.
Fiiri xaalada carrada leh fartaada, adigoo ku dhejinaya dheriga. Xayiraadda carrada waxay soo jeedinaysaa in waraabinta lagama maarmaan tahay.
Markaad waraabisid dhoobada cirifka ah waa inay gebi ahaan qoyaan. Biyuhu waa inay ku qulqulaan digsiga, markaa waa la miiray.
MUHIIM: Ha ka badan yihiin ciidda, xididdada kallana.
Heerkulka cimilada heerkulku waa 25-30 digrii. Xaaladda ugu weyn waa Ha hoos u dhigin heerkulka ka hooseeya 16. Iyo hawadu waa inay ahaato mid kulul, iyo ciidda. Xilliga jiilaalka, ficus ayaa laga yaabaa inuu ka badan yahay daaqadaha ama dabaq qabow oo uu dhinto. Si aad uga hortagto in taasi dhacdo, hana ha dhigin muraayadaha qabow qabow oo ha dhigin dhulka.
Qoyaan badan oo looma baahna, waa ku filan in lagu hayo heerka 50-60%. Si kastaba ha ahaatee, maalmaha xagaaga kulul iyo jiilaalka, inta lagu jiro howlgalka kuleylka, qoyaanku wuxuu yareeyaa 30-40%.
Xalliyaan dhibaatada waxay ku caawisaa ku buufinta joogtada ah, isticmaalka humidifier, ilo qurxinta.
Dharka ugu sareeya waa xaalad lagama maarmaan u ah koritaanka.
Bacriminta Microcarp laga bilaabo guga ilaa dayrta.
Waxaad codsan kartaa bacriminta guud ee dhirta caleen ama bacriminta gaarka ah ee bonsai.
Inta badan habsocodka ayaa ah hal mar labadii toddobaadba mar.
Inta lagu jiro xilliga nasashada - November-February - waa ku filan inaad bacrimiso 30-40 maalmood oo kasta.
Quudinta foliar faa'iido leh.
Nidaamka waxaa lagu daraa buufinta 2-3 jeer toddobaad kasta.
Fiirinta walxaha macdanta, habkan, waa inay ahaataa dhowr jeer ka yar (si taxaddar leh u akhri talooyinka ku jira xirmada).
DIIWAAN: Codso dharka ugu sareeya oo keliya carrada qoyan si aan xididada aan loo dhaawicneyn oo nafaqooyinka si buuxda loo nuugo.
Dareerinta waxaa lagu sameeyaa siyaabaha soo socda:
Iska jooji rafaadka. Caleemaha qoryaha ah. Si aad uga soo saarto cabitaanka casiir cimilada maalinta biyaha. Kadibna ku riday dhalo biyo diirran.
Si aad uga hortagto inaad ku dhufato biyaha waxaa lagu daraa ash qoryo yar.
Ka dib muuqaalka xididada, jirida waxaa lagu dhex beeray dheriga hoostiisa oo ah hoostiisa ilaa uu caleemaha muuqdo.
Lakabyada waxaa lagu kori karaa shaybaarka laga helo goynta.
Wixii dhalmo ah Microcarp leh qaab muuqaal ah ee qaabkan ma aha mid la aqbali karo.
Si aad otvodkaotupa ka hesho taajkii 50-60 cm, jeex jilay ka soo jirridda (10-12 cm) oo ku duub cutubka qoyan ee xoqan iyo filim.
Meeshani waxay ku jirtaa jiilalka bisha. Markaa madaxa sare waa la jaraa oo ku rid weel gaar ah.
Kaliya by habka abuur karaa mid ka mid ah u koraan shaybaarka leh asalka dabiiciga ah.
Daabacaadda abuurka waxaa lagu fuliyaa guga. Ugu horeyntii, waa inaad iibsataa walxo beerto tayo sare leh marka la eego iibka halkaasoo shuruudaha kaydinta alaabta la abuuray.
Haddii miraha si qaldan loo kaydiyey, ma kori doonaan.
Beeraha qoyan iyo qallalan ee lagu soo saaro waxaa lagu soo saaraa weel dabaq ah. Qeybta hoose waxay jiifisaa lakabka dheecaan, ka dibna lakabka carrada.
Dusha sare waa la tamped, qoyan yahay, soo saaray abuur ah on.
Markaas dalagyada waxaa lagu rusheeyaa lakabka yar ee ciidada oo lagu daboolay dhalo ama filim daahir ah.
Wixii dalagyada biqilka waxay u baahan yihiin iftiin iyo kulaylka ku filan (22-250S).
Iyada oo ku xiran tayada iyo xaaladaha maaddada sprouts waxay u muuqdaan 2-4 toddobaad. In wajiga of laba warqadood oo dhab ah dhalaalka ku dhalan.
Inta lagu jiro barbaarinta waxaa loo sameeyaa buufin joogto ah.
Xaaladaha cusub waxaa lagu fadhiistaa weel gooni ah oo aan ka horeyn 60 maalmood ka dib marka la qaado.
Ficus "Microcarp": sida loo sameeyo taaj
Goobab joogto ah waa xaalad lagama maarmaan u ah helitaanka ficus qurux badan. Waxaa la qabtaa guga ama dayrta, bilowgii ama dhammaadka xilliga sii kordhaya, siday u kala horreeyaan.
Geedkii geedkii ahaa mid xoog leh, waxaad u baahan tahay in badanaa iyo si xoog leh u jar dhirta dhalinyarada. Marka manjo, ka saar caleemo badan.
Lafaatiirta waxaa lagu sameyn karaa iyada oo lagu hagayo jihada saxda ah iyadoo la adeegsanayo xarigga.
Caleemaha waa la gaabiyaa marka ay ka badan yihiin 20 sentimitir. Si aad u hesho caleemo tufaax ah oo jilicsan oo ka badan shan sintimitir.
Tani waxay kor u qaadi doontaa koritaanka burooyinkeeda hoose iyo taajku wuxuu noqon doonaa mid cuno leh.
Si loo yareeyo Microcarp, waxay xidhanayaan xididada dhirta, geedaha laga soo saaro miraha waa laga gooyaa.
Xaaladdan oo kale, jirridda ayaa la gooyaa dabka xididka, ka tago stub ah 2-3 centimitir dheer.
Xididdada waa la dhaqaa oo loo qaybiyaa, ka dibna mid kasta waa la beeray si ay qaybta ugu weyni uga sarreyso heerkulka ciidda.
Wixii muuqaalka muuqaalka ah ee caleenta isticmaalaya kiciyeyaasha.
On xididdada waaweyn, grafting of gooyn waa suurto gal ah si aad u hesho taaj oo cajiib ah qaab muuqaal ah.
Cudurada iyo cayayaanka
Ficus daryeel caafimaad oo aan habooneyn ayaa laga yaabaa inay ku haysato dhibaatooyinka soo socda:
Dhibco mugdi ah caleemaha - Natiijada biyo-gelinta.
Fusarium - gooyo xidid. Isla mar ahaantaana ay madoobaan, noqdaan gudaha gudaha, jilicsan. Sababta ayaa ah carrada qoyan iyo qabow.
Dib u soo noqoshada caleen - qalajinta iyo heerkulka hawada sare, waraabinta ku filan.
Muuqaalka kore ee ubaxyada cad. Cagaarka cagaaran ee caleemaha - cudur qaba caarada caarada. Xaaladdan, waa in aad tirtirtaa caleemaha suufka suufka lagu xakameynayo qamriga ama saabuunta dharka lagu dhaqdo iyo daaweynta cayayaanka.
Dhibcaha iyo dhibco ku yaal caleemaha - muuqaalka aphids. Nafaqadeeda waxay ka caawisaa hawada qalalan iyo hawo kulul. Waad burburin kartaa aphids adiga oo ku maydhanaya warshadda xabbad ama saabuun.
TALO. Si looga hortago cayayaanka, caleemaha nadiifi adigoo si joogto ah u nadiifiya.
Waa maxay sababta ficus "Microcarp" dhicid caleemo? Waxa la sameeyo
Caleemaha caleemaha waxay ku dhici karaan sababo kala duwan.
Dhimashada dabiiciga ah. Xaaladdan, ifafaale waa mid gaar ah looma baahna in la dagaalamo.
Isbedelka xaaladaha xabsiga. Haddii "Mikrokarpa" caleemo cagaaran, waxay ka dhigan tahay markaad dib u habeyn ama bedelayso dhirtu waxay la kulantay walaac.
Warshadda gawaarida u gee meeshi hore oo aanad u guurin si aan loo baahnayn.
Cunto khafiif ah ama qashin. Carrabku wuxuu ku dhici karaa infekshin, fayrasna wuxuu galay xididdada geedka marka la beddelay.
Ku daawee fungicides. Sidoo kale, sababtu waxay noqon kartaa dherer aad u ballaaran.
Lack ama xad dhaafka nalalka. Daaqad khafiif ah ama qorraxda tooska ah ee ficusku waxay keeni kartaa caleemo huruud ah.
Xakamaynta xididdada. Xilliga jiilaalka, marka ay ka kooban tahay ficus daaqad ama dabaq qabow si xoog leh u yareeya heerkulka carrada, iyo ficus qaboojiso. Ha ku haynin meel ku dhow galaaska qabow.
Haddii aad kor u foorno dhulka. Xilliga jiilaalka, waxaad dareentaa dareemid, xumbo ama dhowr lakab oo wargeys ah oo ka hooseeya dheriga.
Muuqaalka cayayaanka. Cayayaanka degaya caleemaha iyo cawska waxay nuugaan dheecaanka ka soo baxa unugyada waxayna ku dhintaan.
Si taxadar leh u baaro xayawaankaaga muraayada weyn, maaddaama cayayaanka ay aad u yaryihiin oo ay adagtahay in la garto indhaha qaawan.
Laga soo bilaabo waayo-aragnimada florist
Ha u nadiifi ficus isla markiiba ka dib markaad transplanting - ha la qabsado dhowr maalmood.
Marka buufinta iyo waraabinta aan la helin jirridda - waxay u keeni doontaa in ay qudhmo.
Xilliga jiilaalka, iska hubi in caleemaha aysan taaban dhalada barafka, haddii kale waxaa jiri doona barafoobi degaanka ah.
Marka hawo qaadashada ficus waa in aysan hoos marin socodka hawada qabow.
Hawo kulul oo ka sameysan batariyada ayaa sidoo kale waxyeello u leh isaga.
Ficus Microcarp waa warshad gudaha ku habboon. Daryeelidda isaga waa mid fudud, oo leh manjooyin habboon waxaad abuuri kartaa geed qurux badan oo asal ah oo u adeega faahfaahinta asalka ah ee gudaha guriga.
Raspberry sii kordhaya
Sida loo koro sanbabada, xeerarka koraya iyo daryeesha ubax
Cunto caafimaad leh oo caafimaad leh oo loogu talagalay aagga dhexe ee Ruushka - kala duwan "Lyubimitsa Yakovleva"
Dayactir habboon iyo quudinta digaagga broiler ee guriga
Marka kalluunka la cusbayn karaa jiilaalka miridhka bisha Janaayo 2019?
Caruurta ugu weyn ee bakeylka adduunka
Cornel Jam Cuntada
Noocyo Bacriminta ah ee dhulka u furan
Cabbitaanka dusha sare
Qaboojinta dabiiciga ah
Beeraha lagu dubo
Daryeelka geedka ee Apple
Quudinta digaagga broiler
Qoob-ka-ka-abuurka ah ee basbaas ee dhulka u furan
Blooming calicant - warshad soo jiidasho leh oo leh caraf udgoon. Dhulka hooyo ee geedaha ornamental waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay Waqooyiga Ameerika, halkaasoo lagu magacaabo "basbaaska Jamaican". Maanta waxaannu ogaan doonaa in ay suurtagal tahay in ay ku koraan quruxda quruxda leh ee xaaladaha cimilada, iyo aqoonta iyo xirfadaha loo baahan doono tan. Read More
Sababaha ay caleemaha ubaxu ugu qallalan yihiin baaskiilada: waxaan si taxadar leh u ilaalineynaa geedka
Martida American - noocyo kala duwan oo canab ah "Alpha"
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Soosaarka dalagga 2019